Igbo, Romans, Lesson 020 -- Circumcision is Spiritually Unprofitable (Romans 2:25-29) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 020 (Circumcision is Spiritually Unprofitable)
d) Ibi úgwù abaghị uru ọ bụla na mmụọ (Ndi Rom 2:25-29)
NDI ROM 2:25-29
25 N'ihi na ibi úgwù bara uru n'ezie ma ọ bụrụ na i debe iwu; ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-emebi iwu, ibi úgwù gị abụrụla onye a na-ebighị úgwù. 26 Ya mere, ọ buru na onye anirbighi úgwù n keepsdebe iwu ezi omume nke iwu, àgaghi-agu úgwù ya n’ebìghi-úgwù? 27 Ọ bụrụ na ebighi-ebi n’anụ arụ, ọ bụrụ na o mezuo iwu, na-ekpe gị onye, ọbụlagodi n’edetu ede ede gị na ibi ugwu, bụ onye na-emebi iwu? 28 N’ihi na ọ bughi onye Juu nke bu onye amu n’ezi, ibi ugwu bu nke bu n’anu ahu anya; 29 ma ya onwe-ya bu onye Ju nke di n’ime obi; ibi úgwù bu kwa n’obi, n’ime Mụọ, ọ bụghị n’akwụkwọ ozi; otuto-Ya esiteghi na madu, kama o sitere n'aka Chineke.
Mgbe o mebiwooro mpako nke ndị kwere ekwe nke ndị Juu, dịka ndị Iwu na ndị nkuzi nke ndị mmadụ, Pọl nụrụ na mmụọ ya ụfọdụ n'ime ha na-asị: “Ee! Anyị bụ ihe ọjọọ, n’ihi na ọ dịghị onye zuru oke ma-ọbụghị Chineke. Ma ayi onwe-ayi bu nkwa nke ibi-úgwù: n'ihi na Onye kachasi ihe nile elu bu ihe-iriba-ama a nke iwu, ya na nna-ayi Abraham na nkpuru-ya nile. Yabụ, anyị bụ nke Chineke, ọ bụghị n'ihi na anyị bụ ndị ezi omume, kama n'ihi na ọ họọrọ anyị ”.
(Amaokwu 25) Mgbe ahụ, Pọl, onye bụ ọkachamara na nkuzi okpukpe nke Iwu Mosis, zara echiche ha na-ezighi ezi, na-ekwu na ọgbụgba ndụ ya na Abraham anaghị emebi Iwu ahụ, n'ihi na ọgbụgba ndụ ahụ dabeere na Iwu ahụ, dị ka Iwu ahụ si dị dabere na ọgbụgba ndụ ahụ, dịka Onye-nwe gwara Abraham n'ezoghị ọnụ: "Mụ onwe m bụ Chineke Nke Pụrụ Ime Ihe Niile; nkwa nke mbu, o we muara, n’enweghi ntuzi aka nke Chineke nye Ishmael, ọkpara ya, site n’ohu Ijipt.
Ya mere, Pọl mere ka Ndị Kraịst sitere na ndị Juu pụta na Rom na ọgbụgba ndụ na-enweghị Iwu ahụ, na ibi úgwù abaghị uru na-enweghị idebe iwu. Na usoro, ọ hụrụ na ibi úgwù bụ ezigbo akara na Chineke na-asachapụ onye mmehie site na nmalite ya, mgbe ahụ onye kwere ekwe na mkpụrụ ya na-erubere Chineke isi.
Agbanyeghị, ụkpụrụ a na-emetụta ma ọ bụrụhaala na onye sonyere na ọgbụgba ndụ ahụ na-eme uche Chineke. Mgbe onye kwere ekwe mebiri iwu ma mehie megide Chineke, a ga-ele ya anya dị ka onye a na-ebighị úgwù n’agbanyeghi ibi úgwù ya, n’ebe dị anya n’ebe Chineke nọ, ma bụrụ onye ọbịa n’ebe ọ nọ.
(Amaokwu 26) Ma ọ bụrụ na onye Jentaịl mụta ma debe Iwu ahụ n'ike nke Mmụọ Nsọ, mgbe ahụ onye ahụ e lere anya dị ka onye ebighi úgwù n'anụ ahụ, Chineke ga-ele ya anya dị ka onye e biri úgwù, gụnyere na Iwu ahụ, ma hoputakwa site na mgbe ebighi ebi, n'ihi na Ọgbụgba ndụ na ịhọpụta bụ ma ime ka ndị a hota ma bulie ha elu. Onye obula ruru ebumnuche di nma n’omume ya, n’enweghi mgbidi nke ogbugba ndu ochie, ka aguru na o so n’ime ogbugba ndu ahu.
(Amaokwu nke 27) Onye Juu ghọrọ onye na-emebi iwu Iwu bụ n'ezie n'anya Chineke ịbụ onye a na-ebighị úgwù. Ọ bụghị nanị na onye Jentaịl bụ ezigbo onye Juu ma ọ bụrụ na o debere ihe Iwu ahụ chọrọ, kama onye a na-ebighị úgwù ga-anọdụ ala ikpe onye Juu nke nwere iru anụ ahụ ma ọ bụghị ihe ọ bụla site na nrube isi; n’ihi na akara ngosi nke ibi ugwu anaghị azọpụta mmadụ, kama ọrụ dị nsọ na omume mmadụ na-egosi na ya na Chineke na-arụ ọrụ, ma na ike nke Chineke na-arụ ọrụ n’adịghị ike ya.
(Amaokwu nke 28) Mgbe mwepu a gasịrị, nke ọ na-eleba anya na ọdịnala ndị Juu, Pọl bịara na nkọwa nke aha "onye Juu", nke dị mkpa icheta ma mata ụbọchị ndị a. Onye Juu abụghị onye amụrụ site na mkpọrọgwụ ndị Juu, na-asụ Hibru, ma nwee imi, ma ọ bụ onye Juu nke dị n'ihu Chineke onye kwenyere n'iwu, ebighi úgwù, ma ọ bụ na-ekpe ekpere na Satọde. Onye Juu nke Chineke nabatara bụ onye n’egosipụta mmekọrịta ya na Chineke site n’ịhụnanya, umeala, ịdị nsọ na izu oke. Dabere na nkọwa nkọwa mmụọ a, Jizọs bụ naanị onye Juu zuru oke. Nihi na o nupuru ndi Ju isi ike, ha kpogidere Ya n’onye abua ha; n'ihi mmo nke dk nwayi, nd of nke Abraham ka naekpagbu nd of nke Jizos rue taa. Nkọwa nke pụtara “onye Juu” dịka Pọl dere ya ọ chọrọ ka anyị gbanwee obi anyị.
(Amaokwu nke 29) Ibi ugwu abụghị ihe akaebe na Chineke nwere nke otu mba ma ọ bụ onye kwere ekwe, ọbụlagodi na edere ya ya ọtụtụ narị n'akwụkwọ dị nsọ, n'ihi na Chineke achọghị ka ndị mmekọ dị na ọgbụgba ndụ ya, kama ọ hụrụ n'anya n'obi ọhụụ nke emejuputara Mụọ Nsọ ya. Nani omumu ohuru bu ihe Chineke nechebara dika onye ya na ya ma obu ogbugba ndu ya, ma gozie ndi nile ji otutu nkpuru nke Mmuo Nso nke Mmuo Nso ya. Na agbanyeghị, ndị na-akpọ onwe ha ndị Juu ma ọ bụ Ndị Kraịst ma na-emegide mmụọ nke ịhụnanya nke Kraịst anaghị anabata ya n'agbanyeghị ezi nkwenye ha, mana a na-ahụta ya dị ka ndị iro ya na ọ bụ Onyeikpe ha.
EKPERE: Chineke di nso, anyi n’ekele gi n’ihi na gi na ezi enyi gi Abraham na umu ya buru n’onyinye nke ibi ugwu. Anyi na-ekelekwa gi n’ihi na ị nabatara anyị n’ime ọgbụgba ndụ ọhụrụ gị. Gbaghara anyị ma ọ bụrụ na anyị ejeghị ije kpamkpam n'ịdị nsọ, ma ọ bụ kpaa omume dịka a ga - ebighi obi anyị úgwù na mgbe ọhụụ. Sachapu anyi na mmuo nile di iche, nye anyi obi umeala na ihunanya nke Kraist ka anyi so ya mgbe niile.
Gini bu obibilite n’onwu ma na Agba Ochie?
Dika isi-ike-gi na obi-gi nke enwezighi uche si di
I na-akpakọtara onwe gị iwe
N'ụbọchị ọnụmana nkpughe nke ikpé ziri ezi nke Chineke,
onye ga-akwụ onye ọ bụla ụgwọ dịka ọrụ ya si dị
(Ndi Rom 2:5-6)
Page last modified on January 25, 2021, at 03:40 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)